मापदण्ड बिना टिकट वितरण गरेर ममाथि अन्याय गरियो : लक्ष्मण यादव
नेता, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
० आसन्न चुनावको टिकट वितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै चार दिन आमरण अनशनमा बस्नुभयो । यतिको आक्रोश किन ?
— म चार दिनसम्म अनशनमा बसेँ । तर, राजपाका शीर्ष नेताहरूले वास्ता गरेनन् । म २०४८ देखि हालसम्म सद्भावना पार्टीमा आवद्ध रहेको छु । त्यसपछि एकीकृत पश्चातको राजपामा पनि म सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रीय सभापतिको जिम्मेवारी बहन गरेको छु । म हरेक आन्दोलनमा अग्रणी भूमिकामा रहँदै आएको छु । सप्तरीका जनसमुदायलाई यो कुरा थाहा छ । २०७० सालको संविधानसभाको चुनावका बेला टिकट दिन–दिने भन्दै दिइएन । राजविराज नगरपालिकाका ६ वटा वडाबाट मेरो मात्र नाम सिफारिस भएको थियो । बाँकी वडामा दुई र तीन नम्बरमा सिफारिस गरियो । तर, नेतृत्वले यहाँका जनता, कार्यकर्ता र नेतासँग कुनै किसिमको सरसल्लाह नै गरेनन् । जिल्लामा आएर के छ अवस्था, कसलाई टिकट दिनेलगायत विषयमा नेतृत्वले कुनै चासो दिएनन् । त्यसबेला आन्दोलनमा नलागेका साथीलाई टिकट दिइएको थियो । उहाँले बचन दिनुभएको थियो, साथै अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले पनि बचन दिनुभएको थियो । उहाँहरूले अर्कोपटक टिकट दिने बचन दिनुभएको थियो । तर, यसपटक पनि धोका दिने काम गरियो । यहाँबाट सिफारिस गरिएका नेता परिवर्तन गर्ने काम गरियो । म काठमाडौ पनि गएँ, नेताज्यूहरूलाई पनि भेटेँ । तर, उहाँहरूले मेरो गुनासोलाई बेवास्ता गरे । म जनतामाझ बसेर काम गरेको छु । हरेक पटकको आन्दोलनमा मैले आफ्नो क्षेत्रबाट नेतृत्व गर्दै आएको छु । ६ महिनाको आन्दोलनमा पनि अहोरात्र खटेको छु । त्यसपछि मलेठ घटनामा पनि म अग्रस्थानमा रहेर संघर्ष गरेँ । प्रहरीको कुटाइबाट म घाइते पनि भएँ । बारम्बार जेलनेल भोग्दा पनि पार्टीले कहिल्यै मूल्याङ्कन गरेन । मापदण्ड बनाएर उम्मेदवार तोक्नुपर्नेमा त्यस्तो कुनै मापदण्ड बनाइएको छैन । विधानअनुसार पार्टी चल्नुपर्छ । कुनै पनि कमिटीको सल्लाह नलिएर निर्णय लिने काम गरियो ।
० अनशन तोडेर स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिने पनि भनिरहनुभएको छ । पार्टीभित्रै संघर्ष गर्न सकिँदैन ?
— म आफ्नो कुरा नेतृत्वलाई पटकपटक राखेको छु । म अहोरात्र खटेर जिल्लामा आन्दोलन हाँकेको हुँ । मेरा अवमूल्यन भएपछि आमरण अनशन सुरू गरेँ । तर, नेतृत्वले कुनै चासो देखाएनन् । नेताहरूले मूल्यांकन नगरेपछि कुनै निर्णय लिनुपर्ने स्वभाविक हुन आउँछ । नेपालको राजनीतिमा आज एउटा पार्टीमा भोलि अर्को पार्टीमा जानेहरूलाई पनि टिकट दिएको हामीले प्रसस्तै हेरेका छौं । तर, म त्यत्रो वर्षदेखि सद्भावनादेखि राजपामा सक्रिय रहँदासमेत कुनै वास्ता गरिएन । त्यसकारणले म एकदमै दुखी भएको छु । मैले हरेक हिसाबले पार्टीका लागि काम गरेँ, तर आमरण अनशन बस्दासमेत अध्यक्षहरूबाट कुनै खबर आएन । त्यसकारण पार्टीका साथीहरू जयप्रकाश ठाकुरलगायत सबैलाई बोलाएर मैले अनशन तोडे । म बारम्बार धोका पाएको छु ।
० राजपामा मै बसेर बागी भएर चुनाव लड्नुहुन्छ ?
— म पार्टीमा त्यतिका दिन काम गरेँ । तर नेतृत्वले कुनै दया–माया देखाएनन् । रह्यो पार्टीमा बस्ने नबस्ने कुरा । नेतृत्वबाट मेरो माग सम्बोधन भएन भने पार्टीमा बस्नुको औचित्य रहँदैन । स्वभाविक छ, स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिनु भनेको पार्टी परित्याग हो ।
० पार्टी परित्याग गर्नुहुन्छ ?
— हो । त्यो त गर्नै प¥यो । यसको कुनै विकल्प छैन । स्वतन्त्रमा उम्मेदवारी दिन्छु । सप्तरीमा म मात्र असन्तुष्ट होइन । अरू साथीहरू पनि छन् । पार्टीका सहमहामन्त्री जयप्रकाश ठाकुरलगायतले पनि पार्टी परित्याग गर्ने घोषणा गरेका छन् । जयप्रकाश ठाकुरले पनि तमलोपामा हुँदादेखि नै पार्टीमा धेरै काम गर्नुभएको छ ।
० ६ वटा पार्टी मिलेर राजपा बनेको छ । त्यसकारण पनि उम्मेदवारका आकांक्षी बढ्नु पनि स्वभाविक छ । त्यति मात्र होइन फोरम नेपालसँग तालमेल पनि भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा उम्मेदवार छनौट गर्नु त नेतृत्वका लागि कठिन विषय हो । सबैलाई खुशी पार्न सकिँदैन । भनेपछि त्यतिको चित्त दुखाई किन नि ?
— यो कुरा हामीले सोचेका छौं । नेतृत्वलाई कठिन भएको होला । तर, जनआधारको मूल्याङ्कन गर्ने कि नगर्ने ? कार्यकर्ता भेला गराएर निर्णय लिनुपर्ने हो कि होइन ? त्यस्तो कुनै पनि मापदण्ड पूरा गरेको देखिएन । मूल्यांकन त सही किसिमले गर्नुपर्छ । काठमाडौंमा बसेर निर्णय गर्न मिल्छ ? जसको जिल्लामा कुनै लगानी छैन । पार्टीभित्र चाहीं होला । जनता र कार्यकर्ता समक्ष नपुगेर सिधै निर्णय गर्न मिल्छ ? काठमाडौंमा बसेर निर्णय गर्नु अपराध हो ।
० यो पाली आकांक्षी पनि धेरै भए । तालमेल पनि गर्नुपर्नेलगायत कारणले यस पाली आफू परिएन अर्को पालीका लागि अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो, भनेर सोच्नुभएन । एकैपटक कडा निर्णय लिनुभयो । यसो किन ?
— म आन्दोलनबाट आएको नेता हुँ । जनतासँग काम गरेको छु । प्रत्यक्षमा म दुई सय प्रतिशत ग्यारेन्टीका साथ जित्छु भनेर दाबीसमेत गर्छु । यदि जित्न सकिनँ भने कहिल्यै टिकट माग्न आउँदिनँ । तर, मेरो कुराको कुनै मूल्यांकन गरिएन । म तिन तिन पटक धोका पाइसकेको छु ।
० तपाईंले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने भनेपछि नेतृत्वको कुनै प्रतिक्रिया आयो कि आएन ?
— अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । केही भनेका छैनन् । नेतृत्वबाट कसैले फोनसमेत गरेका छैनन् । त्यसैले मैले यो कदम बाध्यात्मक अवस्थामा उठाएको छु ।
प्रकाशित मिति : २०७४ साल कार्तिक १७ गते, शुक्रबार ।